Korona Fayraska: Sida La Isku Ilaaliyo | UnitedHealthcare Community Plan: Medicare & Medicaid Health Plans
Waa kuwaan fikrado ku saabsan waxa aad samayn lahayd si aadan u caajisin haddii aad u baylah noqoto ama lagaa helo cudurka.
Deg oo joog guriga.
Isku day wax cusub. Kari cunto cusub, samee albam sawir, dheel laadhuu, nadiifi armaajooyinkaaga, samee farshaxano, dhageyso muusiga nafiska lej, oo qor liis waxa aad rabto inaad sameyso marka wax walba ay ku soo noqdaan “caadi.”
Dadka la xiriir.
Waa waqti ku haboon inaad ogaado waxa ay samaynayaan saaxiibadii hore iyo qaraabada fog. Ku qabo kulan qoyseed oo fogaan-arag ah Zoom-ka ama kulan kale oo fogaan-araga ah oo maqal iyo muuqaal ah. Dareemida inaad isku xiran tihiin dadka kale waxay kaa caawin kartaa inaad niyadaada kor u qaado.
Samee dhaqdhaqaaq jireed.
Inaad firfircoonaato waxay kaa caawin kartaa inaad niyadaada kor u qaado aadna taageerto habdhiska difaaca jirkaaga. Ku soco agagaarka xaafadda (balse hubi inaad ilaaliso ka fogaanshaha bulshada). Is kala bixi oo samee yooga. Ku ruclee hal goob oo ku samee qoob-ka-ciyaar gudaha qolkaaga fadhiga. Waxaad sidoo kale dhigaalada jirdhiska ee yaala guriga ka hubin kartaa qorshahaaga caafimaad adigoo galaya koontadaada qorshaha caafimaadka.
Cun cunto caafimaad leh oo isku day cuntooyinka cusub.
Cun miraha, khudaarta iyo cuntooyinka isqaba. Cunnista cuntooyinka caafimaadka leh waa qaab fiican oo lagu caawinayo habdhiska difaaca jidhkaaga. Isku day kiwi ama noocyada kala duwan ee looska ah ama shukulaatada madow. Waxa laga yaabaa inay kor u qaadaan tamartaada iyo niyaddaada sidoo kale.
Sii wad inaad ilaaliso naftaada iyo dadka kaleba.
Markaad qaadayso tallaabooyinkan, waan isla wada shaqayn karnaa si aan gacan uga geysano dhimista fiditaanka fayraska.
Ku dhaqan gacmo dhaqasho habboon mar kasta. Aad ayay muhiim u tahay inaad gacmahaaga ku dhaqdo saabuun ilaa 20 ilbiriqsi kadib markaad joogtay meel fagaare ah, ama aad hindhistay ama qufacday. Sidoo kale iska hubi inaad dhaqdo gacmahaaga markaad diyaarinayso oo aad cunnayso cuntada.
Nadiifi oo jeermis-dil sagxadaha aad taabato maalin kasta, sida miisaska, handaraabyada iyo qasabadaha.
Ku dabool afkaaga iyo sankaaga maaskaro markaaad ag joogtid dadka kale.
Hurdo fiican ayaa fure u ah caafimaadka fiican. Qaado waqti aad ku nasato, neefqaado oo si fiican u seexo. Waa cajiib waxa nasashada fiican kuu tari karto.
Sida loo helo taageerada caafimaadka dhimirka isla markiiba
Haddii aad u rabto caawimaad degdeg ah — adiag ama qof aad jeceshahay — wac 911 ama isticmaal lambarrada degdega ah ee hoose.
Khadka Caawinta Isticmaalka Maandooriyaha
Khadka CaawintaRabshadaha Guriga
Khadka Nolosha ee Kahortagga Isdilka ee Qaranka
Haddii aad dareento in adiga ama qof aad jeceshahay aad wajahaysaan calaamadaha balwadda, wac khadka caawinta qarsoodida ah si aad u heshid 24/7 taageero iyo hagis ku saabsan ikhtiyaarada daawaynta iyo caymiska. Wicitaanka loogu talagalay faragelinta dhibaatada, macluumaadka iyo gudbinada adeegyada deegaanka ee loogu talagalay dhibanayaasha rabshadaha qoyska. Haddii adiga ama qof aad taqaan aad ku jirtaan dhibaato is-dil ama murugo niyadeed, raadsada gargaar degdeg ah isla markiiba. La xiriir khadka nolosha si aad u hesho 24/7, taageero xor ah oo qarsoodi ah iyo faragelinta dhibaatada.
Bogga Hore ee Korona Fayraska
Cusbooneysintii Ugu Dambeysay: 02.07.2022 waqtiga 12:41 GALABNIMO CST